Qaacido noocee ah ayaa ay bixisaa IFOCOP oo sida ugufiican u fulisa rajooyinkaaga, baahiyahaaga, ujeedooyinkaaga iyo miisaaniyadaada? Waxaan kaa caawinaynaa inaad sifiican wax u aragto.
Dhammaan koorsooyinka diblooma ee ay bixiso IFOCOP waxay xaq u leeyihiin Koontada Tababbarka Shakhsiyeed (CPF), taas oo kuu oggolaanaysa inaad maalgeliso dhammaan ama qayb ka mid ah kharashka koorsadaada. Hababka kale ee maalgelinta iyo gargaarka ayaa sidoo kale loo abaabuli karaa tababar. IFOCOP ahaan, waxaa naga go'an inaan ku taageerno oo aan kugula talinno inaad go'aamiso, wadajir, qaaciddada ugu habboon ee kuxiran ujeeddadaada (dib-u-tababar xirfadeed, ansaxinta xirfadaha, iwm.), Xaaladdaada (shaqaale, codsade shaqo, arday…), xaaladdaada shakhsi ahaaneed laakiin sidoo kale maalgelinta aad heli karto.
Foormulada xasaasiga ah
Waa maxay waxani ?
Foomka Intensive waxaa loogu talagalay shaqaalaha iyo dadka shaqo doonka ah ee doonaya inay dib u tababaraan oo ay helaan shahaado la aqoonsan yahay oo ku saabsan shaqadooda. Waxay sidoo kale si gaar ah ugu habboon tahay dadka ku jira xaalad dhaqaale xumo, ha ahaato mid ku jira qaab dhismeedka Qaanuunka Amniga Qaanuunka (CSP) ama fasax dib u habeyn.
Waa intee mudada?
Qaaciddadaani waxay ku saleysan tahay isku darka labada xilli ee xirfadeed: afar bilood oo casharo ah ka dibna afar bilood oo ah dalab wax ku ool ah oo shirkadda ah. Waxbarasho u oggolaanaysa inay isla markiiba ka hawl gasho shirkad.
Maalgelinta tababarkaaga: qaaciddada miisaaniyad kasta July 10th, 2021Tranquillus
READ Xil ka qaadis iyo xaalado cakiran: shaqaalahaaga ma dalban karaa magdhow xitaa haddii khaladku sabab yahay?
horeXoojinta shaqada taleefanka: waa maxay halista dhabta ah ee loo shaqeeyaha?
socdaFoojarka makhaayadaha: shuruudaha isticmaalka oo loo habeeyay illaa Ogosto 31, 2021